POWER TO ZIMBABWE 🇿🇼 .
I go for Bruce Grobe
zimbwa garo mbishi....**** ****
Me i say let's go for Nomara.
Botswana yacho yakamboenda kupi nebhora irori.
pliz go and nyoresa to vote ta mama ne nhamo
I think mapeza is a good coach .... considering the better performance in Cameroon....Mapeza the is my preffered choice..... kwete **** dzekunze uko
Coach wekunze kudiiko ,muchiuraya bhora redu munomu tsvee kugadzira bhora muno macho
Wenharo 1 month ago
Nyoka inouraiwa ne muenzi .ndauye wekunze iyeye hatichada kuona bhora rekuma 1940
Football is suffering under your watch, we are no longer intrested
Coach wekunze kudii pavakabvisa. Antipas paya vakauraya bhasikoro paya maybe pa c apo not wekunze
foreign coach for what as if you have what it takes to pay him. all foreign coaches who left the team you owe each of them
No need for foreign coaches.. Zimbabwean coaches given right support cn do th job.. Let's vote zanu thugs out